Calaamadda Haraadkeena ama Oonkeena - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Waxaan ku aragnay Taariikhda reer binu Israa’iil inkasta oo lagu siiyay Sharciga taariikhdooda xagga Kitaabka Quduuska ah ayaa inta badan ka mid ahayd caasinnimada iyo ku dembaabidda Sharcigaan. Waxaan ku sheegay Horudhaca Axdigii hore in Boqortooyadii raacday Dawud iyo Suleymaan, in kasta oo ay dhaleen jiilka boqortooyooyinkan cibaado la’aanta, badankood waxaay ahaayeen kuwoo shar miiran ah. Sidaa daraadeed Ilaahna wuxuu u soo diray nabiyadii badnaa ee Axdigii hore si ay ugu digaan,.
Yeremyaah – Nebigii Digaha
Nebi Yeremyaah wuxuu ku tusay Jantuuska isaga iyo Nabiyadii la jiray ee Axdigii hore.
(Nebi Yeremyaah – isaga oo ku jira jadwalka taariikhda nebiyada) wuxuu noolaa dhammaadkii xilligii boqorrada, markii dembiga iyo xumaantu aad u weynaayeen. Dembiyada uu xuso waa kuwa maanta sidoo kale caan ku yihiin: sinada, sakhraannimada, sinada, sanamcaariga, sixirnimada, musuqmaasuqa, dagaalka, rabshadda, daacadnimada, taajirnimada oo si xun uga faa iideysata kuwa saboolka ah iwm. Laakiin Yarmiyaah ayaa buugiisa ku bilaabay isagoo tusaalooyin ka siinayo dambigooda iyo isagoo kooxaha dhammaan dambiyadooda ogu cadeeynayo labo hab.
Sida ku qoran Waayo, dadkaygii laba waxyaalood oo shar ah ayay sameeyeen, way iga tageen anigoo ah isha biyaha nool, oo waxay qoteen berkedo daldaloola oo aan innaba biyo celin karin.
Yeremyaah 2: 13
Nebi Yeremyaah wuxuu adeegsanayaa masaalo si uu inooga caawiyo inaan si fiican u fahano dembiga. Ilaah (wuxuu nebigan u soo mari) inuu yiraahdo inay dadkan ahaayeen kuwoo haraadsan.Ma jiraan wax xumaan badan haraad lagu joogo – laakiin waxay u baahnaayeen inay ka cabaan biyo wanaagsan. Ilaah laftiisa ayaa ahaa biyihii wanaagsanaa eek a qancin lahaa harraadkooda. Sikastaba ha ahaatee,intaay haraad ogu imaan lahaayeen inay ka haraad baxaan, reer binu Israa’iil, waxay aadeen berkadaha kale ama meele biyo lagu keediyo. si ay uga qancaan haraadkooda, laakiin ceelashaasi way jabnaayeen ama xumaayeen oo runtii biyo ma aysan celin karin. Si kale haddii loo dhigo, dembigooda, oo nooco badan lahaa, waxaa lagu soo koobi karaayay inay u jeesteen ​​waxyaabo kale oo aan Ilaah ahayn si ay u qancaan ama u haraad baxaan – laakiin waxyaalahaa kale ma harraad goyn karaan harraadkooda. Ugu dambayntii ka dib markay daba galeen dembigoodii, reer binu Israa’iil weli way harraadsanaayeen,laakiinIlaah la’aantii,iyagoo sii ceelashoodii burbursanaa oo keliya- taasi ayaa ahayd waxa sababay dhankooda iyo dambiyadooda.
Xigmaddii Suleymaan ayaa shaaca ka qaadday ceelasheena burbursanaa’
Xaqiiqdii, tan waxaa ku soo aragnay oo noo sharxay Suleymaan. Sidaan ogu soo sheegnay Xikmadda waxaan ka bartay gudbinta Raxmadda Ilaah inay ahayd qoraaladii Salaymaan oo saameyn weyn igu yeeshay aniga. Wuxuu noloshiisa ku tilmaamay sidii mid haysto waxkastoo qof uu doonayo, laakiin aakhirkiina wali wuu Haraadsanaa. Waxaana ahayd sidan sida uu u sharaxay isku daygiisa ahaa ka cabbitaanka ‘ceelashii jaban’ ee isga hareerahiisa ahaa.
Oo anigu reer binu Israa’iil boqor buu ku ahaa Yeruusaalem; Oo waxaan qalbigayga oo dhan u soo jeedshay inaan barto oo xigmad ku baadho waxyaalaha samada hoosteeda lagu sameeyo oo dhan. Waxaan arkay waxa qorraxda hoosteeda lagu sameeyo oo dhan, Iyagu waa wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale.
Waxaan qalbigayga iska idhi, Bal eeg, xigmaddii waan ku sii weynaaday, oo waxaan ka sii weynahay kii ka sii sarreeyey kuwii Yeruusaalem iiga horreeyey. Waxaan soo maray xigmad badan iyo aqoon. Myself applied applied applied Waxaan qalbigayga siiyey inaan xigmad ogaado iyo weliba waalli iyo nacasnimo, oo waxaan gartay inay taasuna tahay dabagalka dabaysha oo kale.
Waxaan qalbigayga ka fikiray oo ku yidhi, Bal kaalay, waxaan kugu tijaabin doonaa farxad, inaad ogaatid waxa wanaagsan. Laakiin taasi waxay sidoo kale cadeysay inay micno lahayn. Waxaan idhi, Qosol, nacas baa leh. Oo muxuu farxad ka helayaa? Waxaan isku dayay inaan khamri nafsadda ku raalli galiyo, oo aan nacasnimo ku xidho, oo qalbigaygu weli xigmad buu iigu hanuunin doonaa. Waxaan doonayay inaan arko waxa u qalma ragga inay ku sameeyaan jannada inta lagu jiro maalmo yar gudahood noloshooda.
Waxaan sameeyay mashaariic waaweyn, guryo ayaan dhistay, beero canab ahna waan beertay. Waxaan samaystay beero iyo firdows, oo waxaan ku dhex beeray geed nooc midho cayn kastaba leh. Waxaan sameeyey balliyo biya ah oo dhirtu ka baxdo. Waxaan soo iibsaday addoommo rag iyo dumar ah oo waxaan lahaa addoommo kale oo gurigayga ku dhashay. Oo weliba waxaan kaloo lahaa adhi badan iyo lo ‘badan, oo waan ka sii hodansanaa kuwii Yeruusaalem iiga horreeyey oo dhan. Waxaan soo urursaday lacag iyo dahab, iyo khasnado khaas ah oo ay boqorro iyo gobollo leeyihiin. Oo waxaan yeeshay niman ii gabya iyo naago ii gabya, iyo waxyaalaha qalbiga ka farxiya dadka qalbigiisa. Markaasaan aad uga sii weynaaday kii Yeruusaalem ka horreeyey oo dhan, Waxyaalahan oo dhan xigmaddaydu way igu jirtay.
Naftayda waxba uma diidin indhahaygu inay saas yihiin, Qalbigayga kuma diidin. Qalbigaygu wuu ku farxay shaqadaydii oo dhan, oo taasuna waxay ahayd abaalgudkii aan hawshaydii oo dhan ka helay. Markaan ka fiirsado wixii ay gacmahaygu sameeyeen oo dhan, iyo wixii aan ku hawshooday oo dhan, oo bal eeg, dhammaantood waxay ahaayeen wax aan waxba tarayn iyo dabagalka dabaysha oo kale. waxba lagama helin.
Sida ku qoran wacdiyaha 1-2
Xigmadii Sulaymaan iyo digniintii Yeremyaah ayaa ah mid inaga manta noo qoran.. Tanina waxaay ahayd mid gaar ah sababtoo oo ah waxaan ku nool nahay da’da ah kuwoo maal amah anti, madadaalo, aflaan, muusig iwm. Marka loo eego jiilalkii hore. Bulshadeenna casriga ahi waa tan ugu dhaqan ahaan, ugu aqoonta wanaagsan, ugu aqoonta badan, safarka badan, madadaalada, farxadda kaxaynta, iyo teknoolojiyadda casrigan ka baxsan da ’kasta. Marka waxaan si fudud u laaban karnaa arrimahan – iyo waxyaabaha kale ee ku dhaca da’dayada: sinada, cilaaqaadka sharci darrada ah, daroogada, khamriga, hunguriga, lacagta, cadhada, masayrka – waxaan rajeyneynaa inay macquul tahay inay taasi qancin doonto harraaddeenna. Waxaan ka ognahay sharciga nebiyadii oo dhan in waxyaabahaasi qaldan yihiin, laakiin waxaan u maleynaynaa inay qancin doonaan harraad ku dhaca qalbiyadeenna sidaa darteed waan u xanuunsannaa iyaga. Taasu waxay ahayd runtii wakhtigii Sulaymaan, wakhtigii Yeremyaah, wakhtigii nebiyadii kale, iyo weliba wakhtigeenna.
Digniinta Yeremiyaah iyo Suleymaan waxaa soo diray Ilaah si ay noogu keenaan inaan is weydiino qaar ka mid ah su’aalo daacadda u ah nafteena.
Waa maxay sababta daddeena casriga ah aanu si adag ula hardano kelinimada,is ilidda,is furidda,Maseerka,cayalka,nacidda,filimaadka waqsita iyo balwadda?
Waa maxay ‘ceelasha burburka’ ee aaduisticmaaleysiid inaad oga haraad baxdiid? Biyaha ma celiyaan?
Ma u malaynaysaa inaad weligaa heli doontid xigmad, jacayl, guulo horumarsan sida Suleyman? Haddii uusan ku qancin guulaha uu gaadhay, ma u malaynaysaa inaad harraad ugu qancin karto waxyaalahan?
Dembigu ma dhawro amarrada laakiin sidoo kale waa mid kale – oo mararka qaar waa inaan fiiro gaar ah yeelanaa. Waxay calaamad u tahay haraadkeena. Mar alla markii aan aqoonsano harraadkan waxa uu yahay waxa aan ku kasbanay qaar xigmad ah. Ilaah wuxuu ku daray Axdigii hore maxaa yeelay si buuxda wuxu u ogaa haraadkeena – wuxuuna doonayaa in aan ka warqabno. Sababtoo ah isagu wuu noo deyn doonaa harraaddeenna oo Isagu wuu doonayaa. Oo wuxuu ku bilawday qaabkiisii ​​caadiga ahaa – isaga oo siiya ballanqaad nebiyadeed oo gaar ah – iyo mar labaad iyada oo loo marinayo Yeremyaah. Tanina waxaan ku eegi doonaa qormadeenna dambe.
Tags:baridda zabourQeyb la'aan Tagsfiqh in zaburwaa maxay dembiga ilaahayWaxsii sheegyada ZaburXigmadda suleiman